AKAITA VANA 3 NAAMAI VAKE – Makuhwa.co.zw
AKAITA VANA 3 NAAMAI VAKE
MUPOROFITA wechechi yeBlood of Jesus International Ministry — uyo anonzi akabuda mumwe imwe kereke ine mbiri — akaripiswa mombe nedare raSadunhu Mwanza, kwaChikwaka, mudunhu reGoromonzi, mushure mekubatwa nemhosva yekuita makunakuna apo akagara naamai vake semukadzi wake ndokutoita vana vatatu.
Chamunorwa Chiwara (38) akaroora amainini, mwana wehanzvadzi yaamai vake — Enestina Chihuri (34) — uyo akaita naye mhuri yevana vatatu.
Nyaya iyi yakambotsikwa-tsikwa kudzimara yakazofumurwa ndokukwidzwa kwasadunhu ava dare rikaedza kuti vaviri ava varambane asi zvakaramba kusvikira Chiwara azoripiswa.
Baba vaEstina, mushakabvu VaFelix Chihuri, vaiva hanzvadzi yaBibiana Makumba, amai vaChiwara.
Pachivanhu, mwanasikana wehanzvadzi yaamai ndiamai.
Sadunhu Mwanza, VaKlemens Marufu (79), vanoti Chiwara akabvuma mhosva yake achiti akaita makunakuna nekusaziva. Akabva aripiswa mombe yechekaukama.
“Chiwara akataura mudare kuti aisava neukama naEstina nababa vake akati munhu waaiziva chete ndiamai vake vekumubereka. Kubva musi uyu akati waaigara naye mumba aisava amai vake asi kuti mudzimai,” vanodaro Sadunhu Mwanza.
Dare ravo raSadunhu Mwanza rakaona nyaya iyi iri pachena, kuti Chiwara aigara naamai vake semudzimai nemurume achiziva sezvo akakurira kumusha kwanasekuru vake kunova kwaakazovapfimba ari.
“Amai vaChiwara vanonzi vakamboramba kutambira mudzimai wemwana wavo uyu vachiti hazvaikwanisika kuti vamuti muroora sezvo aari munin’ina wavo, mwana wehanzvadzi. Zvisinei, mwanakomana wavo akatsika madziro ndokugara namainini ava semudzimai wake,” vanodaro Sadunhu Mwanza.
Mombe yechekaukama yakaripwa naChiwara yakapihwa kuna baba vaEnestina, VaFelix Chihuri.
Chiwara anogara kwaSabhuku Nyamayaro Kudyarawanza, munova mumusha manasekuru vake zvakare vehukama kumadzitezvara ake vekwaChihuri.
Sadunhu Mwanza vanoti kunze kwemuripo wemombe yakabviswa naChiwara, hapana imwe mari yaakazobvisa zvakare yekuroora kusvikira vaita vana vatatu.
Chiwara anonzi mumasvondo matatu adarika akaramba mudzimai wake uyu ndokubva atuta midziyo yake ndokuenda nayo kumusha kwake kunove kumadzisekuru ake.
Achitaura neKwayedza, Enestina anobvuma kuti akaroorwa nemwana wake izvo anoti zvakazobuda pachena pavakapinzwa mudare, murume wake wemakunakuna akaripa.
“Atenge ava murume wangu nekuti akabvisa mombe yechekaukama, zvisinei kuti hama dzangu dzinoramba kumuita mukuwasha vachingoti mwana,” anodaro.
Zvichakadaro, Sekuru Elisha Mutanga vekusangano reZinatha, vanoti mombe yechekaukama inobviswa pane vanenge vaita makunakuna asi haikwanise kupfudza ukama zvachose.
“Kubviswa kwemombe yechekaukama hakureve kuti makunakuna hakusisina, anoramba aripo. Uku kudzikamisa chete midzimu yenzvimbo, hukama hwevanhu ava haupere.
“Munofunga imi kuti amai vemuporofita uyu havasisiri amai vake here? Nekuti kana zvadaro vanofanirwa kuti kumwana wavo babamudiki nekuti akaroora munin’ina wavo? Voti kuhanzvadzi yavo baba vemudzimai uyu amukurungai? Hukama haupere, zvinoramba zvakadaro,” vanodaro Sekuru Mutanga. Mashoko avo anotsinhirwa naSekuru Bonface Katerere vekuUzumba vachiti kubvisa mombe yechekaukama hazvireve kuti hukama hunenge hwapera.
“Makunakuna nekubvisa mombe yechekaukama zvinofambidzana nekuti panenge padanana hama nehama. Mombe inobviswa iyi ndeye kugadzirisa kuti vaviri — mudzimai nemurume — vagone kugara vose. Asi humwe hukama hunoramba hwakadaro vamwewo vachitoramba kutambira hunenge hwatangwa nevaviri vanenge varoorana ava,” vanodaro.
Mbuya Idah Chihuri (74) vanotiwo mombe yechekaukama inoitirwa chete kuti vanhu vapanana mwana kana kuti vawanana paukama varambe vari vose.
Related Topics:Chamunorwa Chiwara
Jonathan Moyo turns his gun on army generals… admits Itai Dzamara was abducted